Niknayman: ပြည်တွင်းအဖွဲ့(၁၂) ဖွဲ့ ပါဝင်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။
ပြည်တွင်းအဖွဲ့(၁၂) ဖွဲ့ ပါဝင်သော လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။
ပြည်ထောင်စု လွတ်မြောက်ရေးအတွက် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
စာအမှတ် - ၁ / ၂၀၀၈
ရက်စွဲ - ဇန်န၀ါရီလ / ၄ ရက် / ၂၀၀၈
( လွတ်လပ်ရေးနေ့ )
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ နှင့် န.အ.ဖ ခေါင်းဆောင်များခင်ဗျား။
ဦးစွာပြောကြားလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် တမျိုးသားလုံး၏ လက်ငင်းနှင့် ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ရှေးရှု၍ ပြည်ထောင်စုကိုချစ်မြတ်နိုးသောစိတ် ၊ လူသားတဦးချင်းစီ၏ လွတ်လပ်ခွင့် နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို လေးစား တန်ဖိုး ထားသော ရပ်တည်ချက်များ ဖြင့် ဤစာကို ပေးပို့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည် ။
ကိုလိုနီကျွန်ဘ၀မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်း ( ၆၀ ) ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း နိုင်ငံသူ ၊ နိုင်ငံသား များအနေဖြင့် လွတ်လပ်ရေး၏ အရသာကို တင်းပြည့် ၊ ကျပ်ပြည့် မခံစားရဘဲ ၊ ပြည်တွင်းစစ်ဒဏ် နှင့် လွတ်လပ်ခြင်း ၊ ညီမျှခြင်း ၊ တရားမျှတခြင်း စသည့် လောကပါလတရားများ ချို့တဲ့သည့် ဝေဒနာကို အလူး အလဲ ခံစားနေကြရဆဲ ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းမှ ယနေ့တိုင် မလွတ်မြောက်နိုင်သေးပေ ။ ထို့အပြင် မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ပြဿနာမှာ နိုင်ငံတကာ နှင့် ဒေသတွင်းနိုင်ငံများ အကြားတွင် ခေါင်းခဲစရာ ပုစ္ဆာတပုဒ် ဖြစ်နေခြင်း မှာလည်း တိုင်းပြည်အတွက် အလွန်ရှက်စရာကောင်းလှပါသည် ။
ယနေ့ ပြည်ထောင်စုတမျိုးသားလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည့် နိုင်ငံရေး ၊ လူမှုရေး နှင့် စီးပွားရေး စသည့် ဘက်ပေါင်းစုံ အထွေထွေအကျပ်အတည်းများမှ လွတ်မြောက်ပြီး ငြိမ်းချမ်းသာယာသော လူ့ဘောင်တရပ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် အမျိုးသားညီညွတ်ရေးမှာ အထူးပင် အရေးကြီးလှပါသည် ။ ထိုသို့ တမျိုးသားလုံး ရင်ကြားစေ့နိုင်ရေးအတွက် န.အ.ဖ ခေါင်းဆောင်များ နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော ဒီမိုကရေ စီအင်အားစုများ အပါအ၀င် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ခေါင်းဆောင်များအားလုံး လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ၊ ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာဖြင့် တန်းတူရည်တူ ၀ိုင်းဝန်းဆွေးနွေး၍ အဖြေရှာကြသော နည်းလမ်းမှတပါး ၊ အခြား နည်းလမ်း မမြင်ပါ ။
စစ်မှန်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများအား တရက်စော၍ ကျင်းပနိုင်လျှင် တိုင်းပြည်အတွက် တရက်ပို၍ အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်သကဲ့သို့ တရက်နောက်ကျလျှင် ၊ တရက်နောက်ကျသလောက် နစ်နာဆုံးရှုံးမှုများ ရှိစေနိုင်ပါသည် ။ သို့ပါ၍ အဓိပ္ပယ်ပြည့်ဝပြီး အားလုံးပါဝင်နိုင်သော တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများ ၊ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည် ပေါ်လာစေရေး အတွက် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော စိတ်ထားများ ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ဖြင့် လက်တွဲကြိုးပမ်း သွားရန် အထူးလိုလားလျှက်ရှိပါသည် ။
ပြီးခဲ့သည့် အတိတ်ဒဏ်ရာများအား သမိုင်းသင်ခန်းစာများအဖြစ် ပြည်ဖုံးကားချခဲ့ပြီး သင်တို့ ၊ ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံး၏ ယနေ့ နှင့် မနက်ဖြန်များစွာ အတွက်ကိုသာ အမျက်အညှိုးမထားဘဲ ချစ်သောမျက်စိဖြင့် ကြည့်ကြ မြင်ကြနိုင်ရေးသည် အသက်တမျှ အရေးကြီးနေပါပြီ ။ ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ တင်းမာရေးလမ်းကြောင်းပေါ်တွင် တဖက်နှင့် တဖက် ကျောခိုင်းပြီး မျဉ်းပြိုင်ရွှေ့လျှား နေကြဦးမည်ဆိုပါက တိုင်းပြည်၏ လူမှုစီးပွား ဒုက္ခ အ၀၀ မှ ကုစား ဖို့ရန် ဆေးမှီနိုင်တော့ မည်မဟုတ်ပါ ။ နောက်ဆက်တွဲ အနေဖြင့် လူထု၏ ဒုက္ခပင်လယ်ဝေမှု နှင့် မွန်းကျပ်ပိတ်လှောင်နေမှု များက အုံကြွမှုများ နှင့် သွေးထွက်သံယိုဖြစ်မှုများဆီသို့ မရှောင်နိုင် ၊ မတိမ်းနိုင်တော့ဘဲ ၀င်ရောက် တိုးတိုက် မိလိမ့်ဦးမည် ဆိုသည်မှာ သံသယဖြစ်စရာ မရှိပါ ။
သို့ဖြစ်သောကြောင့် န.အ.ဖ ခေါင်းဆောင်များ အနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုအကျိုးကို မျှော်ကိုးပြီး ပြည်ထောင် စုသားအားလုံး စိတ်နှလုံး ရွှင်ပြုံးနိုင်ရေးအတွက် ထင်သာမြင်သာသော တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတရပ်အဖြစ် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေကြရသော ရဟန်းသံဃာတော်များ ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ၊ ကျောင်းသား လူငယ်များ အပါအ၀င် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးအား ချွင်းချက်မထားဘဲ ယနေ့ ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက် ( လွတ်လပ်ရေးနေ့ ) မှ စတင်၍ ဖေဖေါ်ဝါရီလ ( ၁၂ ) ရက် ( ပြည်ထောင်စုနေ့ ) နောက်ဆုံးထားပြီး ပြန်လည် လွှတ်ပေးပါရန် နှင့် စစ်မှန်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲများအား အချိန်မဆိုင်းဘဲ အမြန်ဆုံး စတင်ပါရန် လေးနက် တည်ကြည်စွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည် ။ ။
လူထု လှုပ်ရှားမှု ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ
၁. မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုကြီး
၂. တိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့
၃. ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်
၄. ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ
၅. ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသော မွတ်စလင်များ အစည်းအရုံး
၆. မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ အစည်းအရုံး ( Generation Wave )
၇. ရှေ့နေများ သမဂ္ဂ
၈. ကဗျာဆရာများ သမဂ္ဂ
၉. မျိုးဆက်သစ် သတင်းစာဆရာများ သမဂ္ဂ
၁၀. လူထုလှုပ်ရှားမှု ဖော်ဆောင်ရေး ကော်မတီ ( မန္တလေး )
၁၁. ရန်ကုန်တိုင်း လူထုလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ
၁၂. စာပေ နှင့် အနုပညာရှင်များ အဖွဲ့
Posted by Niknayman at 11:36 PM